Xayeysiinta & Waxsoosaarka - Kooxda Istaraatiijiyada Lincoln
Telefishinka & Xayeysiiska Webka
Kooxda Istaraatiijiyadda Lincoln waxay qortay, horumarisay oo la geeyay dhowr telefishan iyo xayeysiisyada abaalmarinta ku guulaysta.
Waxaan ku faaneynaa inaan iska ilaalino fikradaha & fikradaha "cookie-cutter". Sidaa darteed, kooxdeena istiraatiijiyadeed & hal abuurka waxay si dhow ula shaqeyn doonaan kuwaaga si ay si buuxda ugu fahmaan dhammaan ujeeddooyinkaaga xayeysiiska - oo ay la yimaadaan fikrado gaar ah & xariifnimo ah si aad farriintaada u gaarsiiso.
Dhaqanka & Xayeysiiska Raadiyaha Online
Kooxda istiraatiijiyadeed ee Lincoln waxay sidoo kale horumarisay oo meeleeysay xayeysiisyo abaal marinno raadiyaal ah.
Raadiyuhu wali wuxuu u shaqeeyaa sidii warbaahin wax ku ool ah, gaar ahaan marka mashruuca ama ololeha diiradda lagu saarayo deegaan ahaan iyo baadiya ahaanba.
Waxaan si dhow ula shaqeyn doonnaa kooxdaada si aan u fahamno bartilmaameedkaaga dhagaystayaasha ah ka dibna aan u horumarino istiraatiijiyad ballaadhan oo lagu geeyo xayeysiintaada guud ahaan raadiyaha dhaqameed & dijitaalka ah.
Dabcan, waxaan ku dabaqi doonnaa isku dadaalkeena inaan ku siino fikrado gaar ah & xariifnimo oo kala gooyay sawaxanka dhaqameed ee raadiyaha.
Ku Laabo Dhammaan Mashaariicda